Shiinaha oo soo saaraya baabuur aan fayrasku gudahooda geli karin - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaShiinaha oo soo saaraya baabuur aan fayrasku gudahooda geli karin
Beijing (JO) – Shirkadaha baabuurta sameeya ee Shiinaha ayaa bilaabay qorshe ay ku doonayaan in ay ku soo saaraan baabuur “aan fayrasku geli karin”.
Baabuurtan cusub ayaa la qorshaynayaa in ay noqdaan kuwo dadka ka celinaya fayraska oo sida Masks-ka (fool-saabka) qofku xidho oo kale fayraska uga ilaalinaya.
Shirkadaha baabuurta sameeya ee Shiinaha kuwooda ugu waaweyn qaarkood ayaa soo saaraya baabuur cusub oo qaabkan u samaysan waxaana ka mid ah shirkadahaas shirkadda “Geely” ee samaysa tagaasida madmadow ee London caanka ku tahay.
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid suuqa baabuurta ee Shiinaha afartii bilood ee ugu horeeyey sannadkan sababtuna ay tahay xayiraaddii dalka lagu soo rogay.
Shirkadda “Geely” yaa noqonaysa shirkaddii ugu horraysay ee bilowda wax soo saarka baabuurka fayrasku aanu geli karin, waxaanay doonaysaa in ay ka faa’idaysato waayo aragnimadeedii hore ee ay ku soo jiidatay macaamiisha ka baqanayey dikhowga hawada.
Mashruucan “baabuurta fayo qabka” ee ay bilowday shirkaddu ayaa waxa looga gol leeyahay in jeermiska ili ma qabtayga ah iyo fayrasku aanu gudaha baabuurka ugu geli karin darawalka iyo rakaabka midna oo aan loo baahanayn dawooyin la isaga buufiyo.
Shirkadda “Geely” waxa kale oo ay hindisaysaa wax soo saarka qalab jeermiska ili ma qabatayga ah dili kara oo lagu dahaadho badhadana, gacmaha daaqadaha iyo meelaha kale ee gacanta qofku gaadhayso.
Af-hayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay “dadka gaadiidka wataa wakhti dheer ayay baabuurtooda dhex fadiyaan oo ku dhaw wakhtiga ay guryahooda joogaan, waxa markaa waajib noqnaysa in si ay dadku nolol fiican u helaan loo sameeyo baabuur fayo qabkooda aan halis ku ahayn”.
Dhanka kale shirkadda SAIC ee baabuurta ay soo saarto ay ka midka yihiin MG ayaa sheegtay in ay doonayso in ay samayso hab hawada baabuurka soo galaysa ku sifeeya ilayska la yidhaa (infra-red) oo lagu rakibaya AC-ga gaadhiga.
Shirkadda kale ee tartanka kula jirta ee GAC ayaa iyadna sheegtay in ay baabuurta cusub ee ay soo saarayso ku rakibayso qalab hawada sifaynaya saddex goor.
Been wax lagu socodsiinayo
Hase yeeshee shirkadda cilmi baadhista ee Fros & Sullivan ayaa sheegtay in arimaha cusub ee ay shirkaduhu sheegayaan ay yihiin oo kaliya xayeysiis wax lagu iibgeynayo.
Cilmi baadhe ka tirsan shirkadaas ayaa sheegay in sida muuqata ay shirkadaasi xooga saaraya dhanka caafimaadka laakiin barnaamijyadan ay haatan shaacinayaan yihiin kuwo hore ay u sameeyeen oo socday intaan coronavirus ba dillaacin, laakiin safmarkani suuq cusub u sameeyey shirkadahaas.
Waxa aragtidaa la qaba agaasimaha mac-hadka daraasaadka suuqa ee Shiinaha, waxaanu leeyahay shirkaduhu waxay ka faa’iidaysanayaan cabsida dadku ka qabaan coronavirus si ay baabuurtooda qiime badan uga siiyaan shacabka.
Hore way u dhacday arintan oo kale sannadkii 2015 ayaa shirkadda Tesla ee baabuurta samaysaa waxay u soo saartay gawaadhi hawada sifeeya oo ay ugu talo gashay dadka baqanaya in ay wax ku noqdaan dikhowga hawada magaalooyinka waaweyn.
Agaasimahaasi waxa uu intaa ku daray “Shirkadaha baabuurta sameeyaa waxay u dhigayaan baabuurtooda sidii oo ay yihiin kuwo ka gaashaaman fayraska, laakiin waxaan jecelahay in aan dadka u sheego in ay ka digtoonaadaan shirkad kasta oo sheegta in wax soo saarkeedu yaraynayo halista fayraska gaar ahaan coronavirus”
Tirada Dadka Ku Dhimaya Muqdisho Oo Sas Ku Abuurtay Shacabka Soomaaliyeed & Cumar Finish Oo Ka Hadlay